11 casharro steampunk ah oo aadan tabi karin | Abuurista khadka tooska ah
Hada Skoox -kooxeed Waxay asal ahaan ka timid qalinka qorayaasha sida Jules Verne oo soo saaray nooc mala awaal mala awaal ah oo shaqo ku wajahan sideetamaadkii. Intaa wixii ka dambeeyay, waxay bilowday inay qabato cabbirro kala duwan oo ka gudbay suugaan ahaan keliya. Dunida moodada, farshaxanka garaafka ama qurxinta waxaa lagu dhajiyay aasaaska bilicsanaanta ee steampunk. Tiknoolajiyada Steam waa tiirarka aasaasiga ah iyada oo loo marayo shaqooyin la soo saaray oo ku dheehan sheekooyin saynis iyo khayaali ah.
Laxanka halabuurku badanaa wuxuu ku xiran yahay kaydinta farshaxan yahannadii ugu waqtiga dheeraa ee wax saadaaliyey mustaqbal ay ku badan yihiin birta, biraha iyo dhismooyinka farsamada. In kasta oo aysan raacin mabaadi'da gaarka ah ama ay ku xiran tahay xeerar, waxaa suurtagal ah in laga soo saaro qaar ka mid ah astaamaha qeexaya. Dhamaantoodna waxaa badanaa jira midow ka dhexeeya laba adduunyo fog. Waxaan dhihi karnaa steampunk waa Barta isku xidhka iyo la kulanka mucjisooyinka Victoria ama Edwardian iyo kacaanno casri ah.
Hoos waxaan jeclaan lahaa in aan ka soo jeediyo 11 casharro aad u xiiso badan oo diiradda saaraya bilicsanaanta oo aan qashin lahayn. Noocyada garaafka ah sida steampunk, khalkhalgelinta sawirka ayaa loo isticmaali karaa wax badan, iyadoo la helayo natiijooyin tayo sare leh oo ka tagaya afka ku dhowaad melancholic, aragti, carruurnimo. Iyaga ku raaxee!
Sawirka Steampunk ee Photoshop
Kambaska caadiga ah
Halabuurka caadiga ah
Baabuur dahab ah
Balanbaalis leh gears
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » 11 casharro steampunk ah oo aadan tabi karin